Maxaad kala Socotaa Qorshaha ka dambeeya in Ciidanka Huwanta la Wareegaan Afgooye iyo Qorshaha loo dajiyay la wareegida Gobolada Shabeelooyinka - iftineducation.com
Maxaad kala Socotaa Qorshaha ka dambeeya in Ciidanka Huwanta la Wareegaan Afgooye iyo Qorshaha loo dajiyay la wareegida Gobolada Shabeelooyinka
aadan21 / May 26, 2012
iftineducation.com – Gobolada Dalka Soomaaliya waxaa kajira guluf colaadeed oo looga soo horjeedo Dagaalyahanada Al-Shabaab oo kal hore katalin jiray inta badan Gobolada Dalka Soomaaliya ee kujirto Caasidamada Soomaaliya ee Muqdisho.
Al-Shabaab hada waxa ee noqdeen kuwa awoodoodii ay soo aruurtay kuna koobmatay Dhoor Magaalo oo iyada nafteeda loo socdo oo weerar Culus lagu yahay dhoor jihana looga hareereesan yahay lna adoonayo in iyana aan loo deyn oo laga saaro.
Dagaalada Al-Shabaab looga soo horjeedo waa mid Dhinacyo badan oo ka qeyb qaadanayaan Dowladaha dariska ah iyo kuwa Midowga Afrika kasocda iyadoona ujeedka uu yahay in Al-Shabaab gabi ahaan laga ciribtiro Dalka Soomaaliya iyo geeska Afrika.
Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM markaan waxa ee gaareen iskuna fidiyeen Gobolka Shabeelaha Hoose iyagoona ka hor maray Ciidamada Itoobiya oo markii hore ahaa Qorshaha in ay iyagu ka yimaadana Dhinaca Baydhabo soona maraan Wala weyn kuna hakadaan Degmada Afgooye.
Hasa ahatee Madaxda Dowlada iyo kuwa AMISOM ayaa dareemay Naceybka loo qabo Ciidamada Itoobiya ogna in aan laga jecleyn Magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhaw dhaw sidaa darteedna ay qorsheeyeen in iyagu tagaan si ana fashil uga imaan Duulaanka Qorsheesan.
Ciidamada Itoobiya ayaa markaan loo qorsheeyay in ay kasoo dhaqaaqaan Dhinaca Buur hakaba ay ku dhawyihiin eena ku hakadaan ilaa Wala weyn,Sidoo kalana ee Ciidamada Al-Shabaab kawada saaraan Gobolada Bay iyo Bakool kadibna dhinaca kale kasoo galaan Magaalada Marka.
Ciidamada Kenya iyagu waa kuwa ku fashilmay qorshahoodii dagaal ee ku aadanaa in ay la wareegaan Magaalada ugu weyn ee hada Shabaab maamulaan ee Kisamaayo iyadoona Markaan Ciidamada Itoobiya u fakanayaan Magaaladaasi eena sheegen in Shabaab ka saarayaan kol hadii ee Kenya ku fashilantay eena nuuxin weysay.
Qabshada Degmada AFgooye ayaa waxa ee abuureysaa in Qaar kamied ah degmooyinka Shabaab ka maamulaan Shabeelaha Dhaxe iyo Shabeelaha Hoose go’doon galaan eena sahlanaato in ay garaana Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ayna hakiyaan in ay Shabaab isku gurmadaan.
Ciidamaad Itoobiya ee iyana kusugan Gobolka Hiiraan ayaa la qorsheenayaa in Balad Weyn kasoo dhaqaaqaan eena yimaadaan Degmada Jowhar ee Gobolka Shabeelaha Dhaxe halka Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM iyana loo qorsheeyay in ay gaaraan Degmada Balcad ee Gobolka Shabeelaha Dhaxe oo hadaba ay ku wajahanyihiin.
Qorshayaashan Cusub ee Dowlada iyo AMISOM kula wareegeen Degmada AFgooye ayaa ahaa kuwa in Mudo ah loo fakiray sidoo kalana ee noqotay Qorsho guulo lagu gaaro qasaaraha Ciidanka iyo Dadka rayidka ahna lagu yareeyo.
Warar horey usoo baxay Waxa ee sheegayaan in Qorshayaasha Milatari ee lagu qabtay Degmada AFgooye iyo Deegaanada loo barakacay in ay Hogaaminayeen Saraakiil Cadaan ah oo loo badaniyo in ay yihiin Mareekan iyo Fransiis kuwaa oo qeyb weyn ka ahaa Hogaaminta iyo Dagaal galinta Duulaankii lagu qabsaday inta u dhaxeysa Muqdisho iyo AFgooye.
Daawo Sawirada ” Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM oo si xarako leh ugu dhax Socda Afgooye iyo Shacabka oo soo dhaweenayaa
Halkaan ka Aqriso Qodobadii ay isku afgarteen Saxiixayaasha Road Map-kab ee ku Shirayay Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya